उडान अनुमति खारेज भएका ११ एयरलाइन्सले तिरेनन झन्डै साढे ८ करोड
उडान अनुमति खारेज भएका ११ एयरलाइन्सले तिरेनन झन्डै साढे ८ करोड सबैभन्दा बढी बक्यौता नतिरेन नेकोन र कस्मिक एयरका मालिक कता हराए?
नेपाल लाइभ आइतबार, असोज १९, २०७६, ००:१९
काठमाडौं– उडान अनुमति समेत खारेज भइसकेको ११ वटा एयरलाइन्स कम्पनीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयलाई झन्डै साढे ८ करोड बक्यौता लामो समयदेखि चुक्ता गरेको छैन। लामो समयदेखि विमानस्थल सेवा शूल्क वापतको बक्यौता रकम नतिरेन आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान अनुमति पत्र समेत खारेको गरिसकेको छ।
विमानस्थल कार्यालयका अनुसार ११ वटा सञ्चालनमा नरहेको आन्तरिक हवाई सेवा दिँदै बन्द भएका एयरलाइन्स कम्पनीले मात्रै तिर्नु पर्ने रकम ८ करोड ४३ लाख ७५ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ रहेको छ।
जसमा सबैभन्दा बढी निकोन एयर र कस्मिक एयरको छ। यी दुई एयरलाइन्सको बक्यौता रकम मात्रै ८ करोड भन्दा बढी छ। तर, यी दुबै एयरलाइन्स कम्पनीका मालिक अहिलेसम्म विमानस्थलको सम्पर्कमा आएका छैनन।
विमानस्थल कार्यालयलाई ‘विमानस्थल सेवा शूल्क’ बापतको बक्यौता चुक्ता नगरी दुई एयरलाइन्स कम्पनीका मालिक वर्षौंदेखि सम्पर्क बाहिर छन्। एक दशकअघि नै बन्द भएको नेकोन एयरका मालिक दीपमणि राजभण्डारी हुन् भने कस्मिक एयरका मालिक रवीन्द्रप्रसाद प्रधान।
‘पैसा तिरेका छैनन् र तिराउने निकायले पनि के गरेको छ थाहा छैन’, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहतको विमानस्थल कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले ठट्ट्यौली शैलीमा सुनाए, ‘यो देशमा यसको सोधखोज गर्ने कसलाई फुर्सद?’
अहिले दुई वटै एयरलाइन्सको उडान अनुमति समेत खारेज भइसकेको छ। तर, एयरलाइन्स कम्पनीले ८ करोडभन्दा बढी बक्यौता तिरेका छैनन्। लामो समयदेखि विमानस्थल कार्यालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि रकम असुलीमा कुनै चासो देखाएका थिएन।
तर, संसदको लेखा समितिले विमानस्थलको बक्यौता रकमको विषयमा चासो राखेसँगै प्राधिकरणले केही दिन अगाडि असुलीका लागि भन्दै ३० दिनको सूचना प्रकाशन गरेको छ।
विमानस्थल कार्यालयका अनुसार बन्द नेकोन एयरले विमानस्थल सेवा शुल्क बापतको ४ करोड ६३ लाख ८५ हजार ५३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। तर, नेकोन एयरका प्रतिनिधि तथा मालिक सम्पर्कमा नरहेको विमानस्थल कार्यालयको भनाइ छ।
नेकोन एयर २०६२ पुषमा बन्द भएको थियो। एयरलाइन्स बन्द भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि एयरलाइन्सले विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तिरेको छैन। तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको विमानस्थल कार्यालयले भने वर्षेनी आफ्नो आय विवरणमा नेकोन र कस्मिक एयरको बक्यौता रकम पनि उल्लेख गर्दै आएको छ।
नेकोन एयर दीपमणि राजभण्डारीका नाममा दर्ता भएको प्राधिकरणको रजिस्ट्रेसनमा उल्लेख छ। तर, भण्डारी अहिले नेपालमा छैनन्। उनी अहिले अमेरिका रहेको स्रोत बताउँछ।
यसैगरी सन् १९९७ देखि हवाई सेवामा प्रवेश गरेको कस्मिक एयर पनि अहिले बन्द भइसकेको छ। प्राधकिरणका अनुसार कस्मिक एयर २०६९ सालको मंसिर महिनादेखि बन्द छ।
कस्मिक एयरको पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत उडान अनुमति तथा लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ। तर, एयरलाइन्सले अहिलेसम्म विमानस्थल कार्यालयलाई तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता तिरेको छैन।
एयरलाइन्सले विमानस्थल कार्यालयलाई विमानस्थल सेवा शूल्क बापतको ३ करोड ३३ लाख १२ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छैन।
कस्मिक एयरलाइन्स वरिष्ठ पाइलट रवीन्द्रप्रसाद प्रधानको नाममा रजिस्ट्रेसन थियो। प्रधान तत्कालीन राजाका पाइलट समेत हुन्। तर, प्रधानले अहिलेसम्म पनि विमानस्थल कार्यालयलाई बक्यौता रकम चुक्ता गरेका छैनन्।
विमानस्थल कार्यालयले सञ्चालनमा नरहेको एयरलाइन्ससँग असुल गर्नु पर्ने रकम असुलीका लागि नेपाल सरकारको ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग समेत गर्न सकेको छैन।
कुन एयरलाइन्सको कति बक्यौत?
एयर नेपाल–७८ हजार
अल्पाइन एयर–७२ हजार
कस्मिक एयर–३ करोड ३३ लाख १२ हजार
गरुण एयर–२७ हजार
गोरखा एयरलाइन्स– ६ लाख ५७ हजार
कर्णाली एयर–१६ लाख ६४ हजार
मुक्ति एयरलाइन्स– २६ हजार
निकोन एयर–४ करोड ६३ लाख ८५ हजार
नेपाल एयरवेज–११ लाख ७९ हजार
संग्रिला एयर–२ लाख ३७ हजार
स्काईलाइन एयरवेज–७ लाख ३३ हजार